Kulesi sihloko, sihlaziya isipiliyoni wokubambisana kanye nesipiliyoni abagibeli ezindizeni nenkampani Turkish Onur emoyeni. Inkampani, okuyinto sohlelo 3.3 aphume 5 izinkanyezi (lokubuyekezwa ikhambo), odingeka phakathi abagibeli. Noma cha ukwethemba ngenani kunalokho encane ukuphepha kwakhe siqu, imithwalo ajabule? Lokhu sizobona manje nixoxe.
Inkampani yezindiza Onur emoyeni, ukubuyekezwa ka iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, yasungulwa ngo entwasahlobo ka-1992. Kakade ngoMeyi, A320, ephethwe inkampani, eyenziwa indiza yayo yokuqala e-North Cyprus Ercan Airport. Ukuyiqonda injongo yangempela yokunikezwa omkhulu ezokuvakasha bezikhali Turkey, "Onur Eyr" usayine inkontileka ekalishi abagibeli ngesikhathi zokungcebeleka yindawo ehamba phambili inkampani Ten Tour. Futhi ithemba.
Lokhu kusebenzisana opharetha ukuvakasha avunyelwe esiphathiswa nomoya ukungena emingceleni ezintsha. Phakathi neminyaka emithathu ngemva kokumiswa inkampani kwadingeka liner ayisishiyagalolunye. "Onur Aer" ngempumelelo badlula nkinga, futhi kusukela ngo-2008, ekuqaleni umfutho kabusha Yakha.
Onur emoyeni (yezindiza): imikhumbi
Inkampani yenethiwekhi kusukela ekuqaleni isisekelo salo wanquma ukuletha abagibeli ukuba Istanbul, kanye charter izindiza ezivela Western, naseYurophu eMaphakathi neseMpumalanga ezindaweni zokungcebeleka ogwini Anatolia Turkey. Futhi ukuze abe kuqala kunezinye izindiza, "Onur Eyr 'ozitholela izindiza ivulekile. Ngakho, umsebenzi usuthela futhi yenza inzuzo, kusukela ukugeleza abagibeli akuyona encishisiwe. Bekanye eziyisishiyagalombili Airbus A320 anesithoba A321 yezindiza wathenga ezine A330 ububanzi futhi evulekile. ngaleyo ndlela Imikhumbi siqukethe amabili eyodwa liner.
Aircraft Onur Air Izibuyekezo ngokuthi ehlanzekile yesimanje. Kodwa umuntu ophakeme noma abakhuluphele kuyoba lapha ungakhululekile ikakhulukazi, ngoba imigqa isihlalo kukhona eduze komunye nomunye. Reclining backrest kubangela ukukhathazeka ezingemuva umgibeli. Kodwa inkampani ayenzi eside hola izindiza. Ngakho-ke, iningi abagibeli bathi bakulungele ukuhlupheka ngokuphazamisa ezincane, kusukela impukane oya endaweni yakho amahora ambalwa nje.
Inkampani lisuselwe sezindiza Istanbul yaqanjwa Kemal Ataturk. Lapho amasevisi avamile esiphathiswa Onur Air? Izibuyekezo okukhulunywa imizila kusuka eMoscow (Sheremetyevo) neKazan ukuze Antalya. Kodwa izindiza abanjalo bangabaphostoli kuphela sisekelo isisekelo e samaholidi. Futhi izivakashi Russian abathi yamabhanoyi nge zokungcebeleka inkampani e-Turkey Nalchik, Grozny, Volgograd, Nizhny Novgorod, Samara futhi Chelyabinsk. Kulula kakhulu ukuthola kusukela yenethiwekhi "Onur Eyr" e Istanbul, futhi ukusuka lapho - kweminye imizi Turkey naseYurophu.
Ngokuvamile, inkampani wenza izindiza njalo phezu izindawo ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha. Ngosizo lokhu yenethiwekhi engafinyelelwa e Berlin, Dusseldorf, Amsterdam, Stuttgart. Uma ufika inkampane yaleyo ndiza 'Onur Eyr "e Istanbul, ngemikhumbi yakhona nginiyise e Izmir, Antalya, Gaziantep, Trabzon nakwamanye amadolobha e-Turkey. izindiza ezaziwa kusukela Istanbul ukuba Odessa (Ukraine) kanye Dortmund (eJalimane) ukuze Antalya.
Onur emoyeni (yezindiza) Sibutsetelo
Lokhu yenethiwekhi inezidingo sesevisi izindiza kwayo base yayo sezindiza kubo. Ataturk e Istanbul. Futhi, abasebenzi yenkampani ukusebenza kule ihabhu ukuthi ukuqhuba check-in. izindiza gumbi luhlukaniswe ekilasini umnotho futhi ibhizinisi. Egumbini lesibili imigqa esihlalweni akuzona Friend ngakho, futhi ungakwazi uhlale ngaphezulu kahle.
Ngokuvumelana nalezi abagibeli babe imithetho ehlukene empahleni. Plain inikeza nanhlanu amakhilogramu izindiza yasekhaya, futhi amabili - ngamazwe. Abagibeli flying ekilasini standard, ungakwazi ukuthwala amathathu amakhilogramu imithwalo ehlukahlukene, futhi okukhethekile - ezingamashumi amane. Hand umthwalo uhlale Kilos eziyisishiyagalombili. Ngeshwa, ezifuywayo bengaphumi abagibele Onur emoyeni (yezindiza). Check-in Kuvalwa isigamu sehora ngaphambi kokuqala izindiza yasekhaya futhi imizuzu engamashumi amane nanhlanu - ngamazwe. Chekin inthanethi kusuka ngosuku olulodwa ngaphambi kokuhamba futhi iphela amahora amabili.
Yini abahambi bathi mayelana yezindiza Onur Air? Izimpendulo ngakho ikakhulukazi omuhle. ehlobo Kugcine, inkampani yasuka isiRashiya, futhi kuye kwaba izivakashi eziningi, asetshenziswa ngubani ezindiza zokungcebeleka Turkish ku aircraft lolu hambo, ukulahlekelwa okukhulu. Kodwa ekwindla, "Onur Eyr" Waphindela eRussia. kobufakazi Okuningi ukubalula ukuthi charter izindiza zivame ukufika, kodwa asuke njalo ngesikhathi esinqunyiwe. Abagibeli abaningi, ikakhulukazi labo abahamba ekilasini ejwayelekile futhi okukhethekile, badumise ukudla emikhunjini ibhodi Onur emoyeni.
Airline, ukubuyekezwa zazo ningi of them are omuhle, uhlelo ibhonasi, ekhuthaza amakhasimende njalo yabo izaphulelo. Uma uba yilungu club "OnurEkstra", bese i-ithikithi ngalinye ku imali yakho siqu akhawunti livela ezimbili kuya kweziyisishiyagalombili cent ngokujulile ukubaluleka kwaso (lemali incike tariff) ngayinye. Le nkampani elula ukuhamba nezingane. Izingane kuze kube travel iminyaka emibili ubudala kancane njengoba eziyishumi amaphesenti izindleko. Futhi ezinganeni kuze yamanani ekhethekile nambili.
Emaphilisini ekhanda ebunzini: Izimbangela Nemiphumela